Ogaden News Agency (ONA) – Dhagaysiga Dacwadii Bada ee Soomaaliya & Kenya oo Lasoo Gaba-Gabeeyay.
Dhagaysiga Dacwadii Bada ee Soomaaliya & Kenya oo Lasoo Gaba-Gabeeyay.
Posted by ONA Admin	/ September 24, 2016
Waxaa shalay Jumcadii lasoo gabagabeeyay dhageysiga Maxkamada Caalamiga (ICJ ) ah ee dacwadii Soohdinta Bada ee u dhaxeysay Soomaaliya iyo Kenya.
Dhageysiga dacwadan ayaa bilaabatay maalintii isniinta ahayd, waxayna qeybtan hore ee dacwada la xidhiidhay codsi ka yimid dalka Kenya oo ku dooday in Maxkamada Caalamiga ah ee ICJ ay joojiso dacwada ay keentay Soomaaliya. Kenya ayaa ku doodeysa in labada dal ee Jaarka ah ay iyagu dhexdooda ka heshiiyaan isla markaana Maxkamada aysan gelin kiiskan.
Kenya ayaan iyadu keenin dood ku saabsan inay isku dayday inay khalado soohdinta dhanka bada ee la laheyd Soomaaliya oo ah kiiska ay dowlada Soomaaliya soo gudbisay, balse doodeeda ku koobtay in wax walba oo ka dhaxeeya Kenya iyo Soomaaliya lagu xaliyo wadahadal diblomaasiyeed iyo is afgarad oo aysan arrintu gaadhin maxkamada.
Waxay sidoo kale Kenya ku dooday in horey heshiiskii MOU ee 2009 uu ahaa mid muujinayey in Soomaaliya iyo Kenya ay wadahadali karaan oo dhexdooda ka heshiin karaan.
Dhinaca Soomaalida ayaa ku dooday in heshiiskii MOU 2009 uusan wax xidhiidh ah lalahayn dacwadan ku saabsan Soohdinta bada oo ay Kenya isku dayday sanadkii 2005 inay bedasho, balse heshiiskii is afgaradka ah ee 2009 uu la xidhiidhay oo kaliya Codsiga labada dal ay u gudbinayeen UN-ka CLCS ee bada uga maqan oo uu wadan walba si gaar ah u gudbistay. Waxay sidoo kale dowlada Soomaaliya ku dooday in khilaafka ku saabsan xuduuda badda cida kaliya ee awooda ulleh inay xaliso ay tahay Maxkamada ICJ oo ah tan u garqaada Wadamada Caalamka.
Garsoorayaasha Maxkamada ICJ ayaa dib isugu noqon doona iyagoo falan qeyn doona qodobada ay soo gudbiyeen labada dal waxaana lagu wadaa inay jawaab kasoo saaraan horaanta sanadka soo socda ee 2017. Waxay sidoo kale Garsoorayaasha Maxkamada ICJ ay su’aalaha dheeraadka ah oo ay ka qabaan cadaymaha ay labada dhinac soo gudbiyeen u gudbinayaan Qareenada labada dhinac oo laga rabo wixii faah faahin dheeraad ah usoo gudbiyaan Maxkamada.
Maxkamada Caalamiga ayaa horey u qorsheesay in sanadka soo socda ee 2017 ay gasho dacwada Soomaaliya iyo Kenya, balse waxaa kasoo hormaray dooda ka timid dhinaca Kenya oo codsatay dhageysigan ah in la hakiyo dacwada oo ay dib isugu noqdaan wadahadal labada dal ee uu murranka ka dhaxeeyo.
Jawaabta Maxkamada laga sugayo ayaa qaadan karta muddo bilo ah 3-6 bilood, kadibna waxay Maxkamadu sheegi kartaa laba qodob mid kood oo ah in ay bilaabeyso dhageysiga rasmiga ah ee Dacwada Soomaliya soo gudbisay ama in ay dib ugu soo celiso dacwada labada dal inay marka hore soo wadahadlaan oo hadii ay heshiin waayaan dib ugu soo noqdaan Maxkamada.